Sidee buu u dhici doonaa caleemo saarka Trump maanta - BBC Somali
Sidee buu u dhici doonaa caleemo saarka Trump maanta
Daawo: dhaarinta madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump
Goobta isha lagu hayn doonaa waa US Capitol oo ah goobta uu Trump sida rasmiga ah ugala wareegi doono Barack Obama madaxtinimada dalka iyo Aqalka Cadba.
Image caption Ku dhawaad hal milyan oo qof ayaa la filayaa inay garaan magaalada Washington
Trump wuxu ka qayb geli doonaa duco lagu dhigi doono kaniisadda St John's Episcopal oo u dhaw Aqalka Cad.
Image caption in ka badan 1.8 milyan oo qof ayaa ka qeybgalay xafladdii dhaarinta Obama sanaddii 2009
YAAN KA QAYB GALAYN?
In ka badan 50 xubnood oo ka tirsan xildhibaannada xisbiga Dimuqraadiga ayaa si cad u sheegay in ay diideen in ay ka qayb galaal xafladda iyadoo uu taagan yahay xafiiltan dhex yaal madaxweynaha dhowaan la doortay iyo ninka u ololeeya xuquuda dadka rayidka ah Xildhibaan John Lewis..
MUDAHARAADDADU MAXAY YIHIIN?
Isku soo baxyo dhawr ah ayaa dhigi doonaa oo qaarna lagu diidanyahay kuwo kalena lagu taageerayo Trump, waxaanay socon doonaan dabayaaqada todobaadkan oo dhan.
Isku soo baxa ugu wayni wuxu noqon doonaa socod ay haweenku ku mari doonaan Whashingto oo la filayo in ay ka qayb galaan 200,000 oo qof 21 January.
Waxa looga golleeyahay in lagu muujiyo isir takoorka, sinnaan la'aanta labka iyo dheddigga, in la helo adeeg caafimaad oo cid kastaa awoodi karto, xaqa dumarku u leeyihiin in ay uurka iska soo ridaan iyo xaqa codaynta oo dhamaantood ah arrimo ay dadkaasi aaminsanyihiin in Trump halis ku yahay.
TRUMP SIDUU U DABBAAL DEGI DOONAA?
Trump wuxu diyaariyey qorshe ballaaran oo ay ka qayb galayaan kooxaha Mormon Tabernacle Choir, Radio City Rocketts, xidigaha ku caanka ah heesaha Country ee Toby Keith iyo Lee Greenwood, 3 Dopor Down iyo sidoo kale heesaagii u tartamay inuu ku guulaysto barnaamijka America's Got Talen Jackie Evancho oo dhamaantood heeso soo badhigi doona.
Madaxweyne Trump iyo kuxigeenkiisa waxay sidoo kale tegi doonaan saddex xafladood oo caleemo saar rasmi ahi ka dhici doono kuwaas oo ay ka soo qayb gali doonaan taageerayaasha maamulka cusubi.
GOORMUU SHAQADA BILAABAYAA?
Ninka noqonaya madaxweynaha 45-aad ee Maraykanku wuxu wacad ku maray inuu meesha ka saari doono siyaasadihii Obama ila maalinta ugu horraysa ee uu xafiiska fadhiisto, laakiin ma cadda inuu Jimcahaba bilaabi doono iyo inuu Isniinta la sugi doonaa.
Af-hayeenka Trump Sean Spicer ayaa ka sheegay shir jaraa'id in marka Jimcaha la dhaariyo madaxweynaha cusub , uu Arbacada soo socotaba soo saari doono afar ilaa shan qaraar madaxweyne.